gPodder - Linux အတွက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမီဒီယာ aggregator နှင့် podcast client ဖြစ်သည် Linux မှ
gPodder - Linux အတွက်ရိုးရှင်းသောမီဒီယာ aggregator နှင့် podcast ဖောက်သည်
ယနေ့ခေတ်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်အလွန်ခေတ်မီသည် podcasts၏လယ်ပြင်အဘို့, မသာ ဖြန့်ဝေ, သင်ယူနှင့်သင်ကြားရေး ၏လယ်ပြင်ကနေ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်နှင့် GNU / Linuxသို့သော်အကျယ်အဝန်း၊ အကြောင်းအရာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးအတွက်အမျိုးအစားများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည် «gPodder ».
«gPodder » သေးငယ်ပေမဲ့အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ software tool တစ်ခုဖြစ်သည် GTK + နှင့်အတူ Python ကို, ရိုးရှင်းတဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်တယ် မီဒီယာ aggregator နှင့် Podcast တခုကို client ကို Linux အတွက်အဲဒါကငါတို့ကိုခွင့်ပြုတာပဲ မျိုးစုံ podcast လိုင်းများကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ နားထောင်ပါ ရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်ခြင်းလမ်းအတွက်။
Goodvibes - အင်တာနက်မှအသံများကိုနားထောင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလျှောက်လွှာ
ငါဖော်ပြရန်စတင်မီ «gPodder »ပုံမှန်အတိုင်းဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်သင့်အားအကြံပေးသည်။ Linux ရှိ Podcast ကိုနားထောင်ရန်အသုံးဝင်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်ထုတ်ဝေမှုကိုလေ့လာပါ။ ချစ်တယ်»အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဖော်ပြထားတယ် -
"Goodvibes သည် GNU / Linux အတွက်ပေါ့ပါးသောအင်တာနက်ရေဒီယိုဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဘူတာများကိုသိမ်းထားရုံဖြင့်သိမ်းနိုင်သည်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံများကိုရှာဖွေရန်မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်မျှမရှိပါ။ အသံစီးကြောင်း၏ URL ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်သိသည်၊ အသုံးပြုရန်မလွယ်ကူသော်လည်း၎င်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ"။
သို့သော်နားထောင်ရန်လျှောက်လွှာဖြစ်သော်လည်း အင်တာနက်ရေဒီယိုများနှင့်အတူ နည်းနည်းလှည့်ကွက် ပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းလမ်းကြောင်းအချို့ကိုနားထောင်နိုင်သည် podcast.
1 gPodder - မီဒီယာစုစည်းခြင်းနှင့် Podcast သုံးစွဲသူ
1.1 gPodder အကြောင်းကိုအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်
1.2 ဗားရှင်း ၂၀၁၁.3.10.17 အသစ်
1.3 Installation နှင့် Screenshots
gPodder - မီဒီယာစုစည်းခြင်းနှင့် Podcast သုံးစွဲသူ
သင့်ရဲ့အဆိုအရ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လောလောဆယ် «gPodder » သူ့အဘို့တတ်၏ ဗားရှင်း ၂ ။ ဤနှင့်၎င်း၏ယခင်ဗားရှင်းများကိုအောက်ပါကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည် link ကို။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်ဒါဟာ Linux Desktop လိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးများကိုစီမံခန့်ခွဲရန် (download လုပ်ရန်နှင့်နားထောင်ရန်) ခွင့်ပြုသည် podcast လိုင်းများ podcast ကိုထည့်ခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း / ရှာဖွေခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တင်သွင်းခြင်း / တင်ပို့ခြင်းကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များနှင့်အလွန့်အလွန်ကောင်းမွန်သောပေါင်းစည်းမှုလည်းရှိသည် «Soundcloud (soundcloud.com)» y «GPodder (gpodder.net)».
ဗားရှင်း ၂၀၁၁.3.10.17 အသစ်
ဒီနောက်ဆုံးတည်ငြိမ်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတဲ့အင်္ဂါရပ်အသစ်များ (ပြုပြင်မှုများနဲ့တိုးတက်မှုများ) ထဲမှာ၊
YouTube-DL function ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်
ယခုအခါတစ်ခုတည်းသောအသိပေးချက်ကိုထုတ်ပေးသည့်အရင်းအမြစ်စုစည်းမှု (feeds) ကိုအသစ်ပြောင်းခြင်း၏အမှားများကိုပြင်ဆင်ခြင်း။ ဘယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဘေးတွင်သတိပေးအိုင်ကွန်အားဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဘာသာစကား၊ တရုတ်၊ ရုရှ၊ ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ၊ ၎င်း၏ interface ကိုစပိန်ဘာသာစကားအတွက်လုံးဝဘာသာပြန်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊
Linux, MacOS နှင့် Windows အတွက်ရနိုင်သည်။
Installation နှင့် Screenshots
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွင် gPodder ကို အသုံးပြု၍ install လုပ်ထားပါပြီ မင်္ဂလာပါ, ကိုယ့်အကြောင်း MX Linux ကိုယ်ပိုင် Respin (MilagrOS)အောက်ပါ command ကိုလုပ်ဆောင်ရန်သာလိုအပ်သည်။
ထို့နောက် run နှင့်အသုံးပြုရန်ရန် Applications ကိုမီနူး။ အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းကြည့်ရအောင် -
မှတ်ချက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ «gPodder » ငါအာဏာကိုတကယ်ကြိုက်တယ် YouTube Channel တစ်ခု၏ URL ကိုထည့်ပါ နှင့်မည်သည့်ပြwithoutနာမျှမပါဘဲသူတို့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူတို့၏ feeds လိပ်စာများကိုအလွယ်တကူရရှိရန်၊ ဥပမာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခု၏ feeds များတွင်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ပြီးတော့ငါမကြိုက်ဘူး၊ ယူလာတာမဟုတ်ဘူး installer ဖိုင်များ «.deb, .rpm o .AppImage»ကအတန်ငယ်အတွက်ရရှိမှုဖြည့်စွက်ပေမယ့် Launchpad။ တစ် ဦး ထက်ပိုသောအဆင့်မြင့်အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်နိုင်သည် Podgrab.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «gPodder», သေးငယ်ပေမယ့်အလွန်အသုံးဝင်သော software tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး GTK + နှင့် Python တွင်ရိုးရိုးလေးအလုပ်လုပ်သည် မီဒီယာ aggregator နှင့် Podcast တခုကို client ကို Linux အတွက်; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » gPodder - Linux အတွက်ရိုးရှင်းသောမီဒီယာ aggregator နှင့် podcast ဖောက်သည်
Raspberry Pi Foundation သည်မိုက်ခရိုဆော့၏ repository ကိုလျှို့ဝှက်စွာတပ်ဆင်ခဲ့သည်
Kobalos, Linux, BSD နှင့် Solaris တို့တွင် SSH အထောက်အထားများကိုခိုးယူသည့် malware တစ်ခု